Maxaa kasoo baxay shirarkii kala duwanaa ee magaalada Dhuusamareeb ka dhacay? - Caasimada Online
Home Warar Maxaa kasoo baxay shirarkii kala duwanaa ee magaalada Dhuusamareeb ka dhacay?
Maxaa kasoo baxay shirarkii kala duwanaa ee magaalada Dhuusamareeb ka dhacay?
Dhuusamareeb (Caasimadda Online) – Saacadahii lasoo dhaafay waxaa magaalada Dhuusamareeb shirara gaar-gaar ah ku yeelanayay madaxda dowladda Federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Shirka ugu muhiimsanaa wuxuu dhexmaray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo labada madaxweyne ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, oo ay si aad ah isku khilaafsan yihiin.